Fiadidiana ny primatiora: “Aoka ho mailo amin’ny tsaho sy resabe tsy marim-pototra” | NewsMada
Fiadidiana ny primatiora: “Aoka ho mailo amin’ny tsaho sy resabe tsy marim-pototra”
Namoaka fanambarana ny avy eny Mahazoarivo, omaly, manoloana ny tsaho sy ny vaovao tsy marim-pototra maro aparitaka na amin’ny haino amanjery sasantsasany na amin’ny tambajotra sosialy. “Maneho ny tsy fankasitrahany tanteraka ny fanaparitahana tsaho, lainga ary fanaratsiana isan-karazany, zary lasa fomba fanao mahazatra amin’izao vanim-potoanan’ny fifidianana izao ny praiministra. Miantso ny olom-pirenena rehetra ho mailo ka hahay handinika sy handanjalanja, tsy ho mora handairan’ireo resabe tsy marim-pototra aely”, hoy ny fanambarana. Tafiditra ao anatin’izany ny fikendrena tanjona mba handotoana azy eo anatrehan’ny olom-pirenena sy hanimbana ny fiatrehan’ny firenena ny fifidianana. Nohitsin’ny fanambaran’ny eo anivon’ny fiadidiana ny primatiora fa tsy nanangana “cellule de crise” manokana izany ny tenany. Tsy nikononkonona fisamborana na mpanao gazety na olon-kafa.
Manameloka ny famafazana lainga…
Tsy niaro olona nanao ny tsy ara-dalàna teny amin’ny seranam-piaramanidina na tamin’ny toeran-kafa ary tsy nanakana velively ny famahana ny olana amin’ny resaka fanadiovana ny tanàna eto an-dRenivohitra. “Manameloka ireny famafazana lainga ireny ny praiministra. Mifanohitra tanteraka amin’ny fomba nitaizana azy sy ny etika ary ny toetsaina maha tompon’andraikitra, nibaiko azy hatrany eo am-panatanterahana ny asany”, hoy ihany ny fanambarana. Nasongadin’ny serasera any Mahazoarivo koa fa voarakitra an-tsoratra avokoa sy manaraka ny lalàna manan-kery ny fanapahan-kevitra rehetra noraisin’ny Praiministra Ntsay Christian amin’ny maha lehiben’ny governemanta azy. “Tsy hiray tsikombakomba amina teti-dratsy mandripaka ny harem-pirenena amina zavatra tsy ara-dalàna hanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena ny tenany”, hoy ihany ny fanambarana.
Mazava ny iraka hotanterahin’ny Praiminisitra Ntsay Christian
Notsipihin’ny eny Mahazoarivo fa manana tanjona mazava ho tratrarina ny praiministra araka ny iraka iandraiketany eo amin’ny fitantanana ny governemanta. Mifanaraka amin’ny adidy nekeny mba hanalana ny firenena ao anatin’ny krizy izany. “Eo ny fifidianana, ny fametrahana ny fahamarinan-toerana eo amin’ny lafiny toekarena, ny fikatsahana mandrakariva ny fifandanjana eo amin’ny sosialy, ny fampiroboroboana ny filaminana sy ny fandriampahalemana, ary ny famerenana ny fahaiza-mitantana ny firenena”, hoy izy ireo.